Jawaabaha Oo Bilowday Xulasho Dhexgal | Martech Zone
Jawaabaha Ayaa Bilaabay Kala Hortagid Xulasho
Isniin, April 29, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maaddaama shirkadaha tiknoolajiyada suuqgeynta waaweyn ay ku milmaan oo ay ku bartaan codsiyada kale ee ku dhex jira badeecadooda, inta badan farqi ayaa u dhexeeya awoodda uu u leeyahay macaamilku inuu dejiyo dookhyada wada xiriirka Haddii aad rabto emayl, waxaad aadeysaa hal bog, haddii aad rabto digniinta mobilada, mid kale… haddii ay SMS weli tahay mid kale. Sida laga soo xigtay Forrester, 77% macaamiisha doonaya inaad awood u yeelato inaad go'aansato sida ganacsiyada ay awood ugu yeelan karaan inay la xiriiraan iyaga.
Markii ugu horeysay, Jawaabaha waxay siineysaa suuqleyda awood ay si fudud ugu ururiyaan una maareeyaan doorbidyada dhibcaha taabashada dhijitaalka ah iyo kuwa jirka labadaba, iyadoo la yareynayo halista ganaaxyada iyo dacwadaha qaaliga ah, dhammaanba hal teknoolojiyad.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, noocyada waaweyn ee sumcadda weyn leh ayaa lala beegsaday dacwado raadinaya tobanaan milyan oo doolar si loogu suuq geeyo macaamiisha fasax la'aan. Khaladaadkan qaaliga ah waxay dhacaan maxaa yeelay suuqleydu ma haystaan ​​tiknoolajiyad sax ah oo lagu mideeyo oo si firfircoon loogu maareeyo macaamiisha dookhyadooda iyo ogolaanshahooda meel kasta oo isdhexgal ah, laga bilaabo emaylka illaa moobiilka illaa mooska iibka. Jawaabcelinta Isdhexgalka Jawaabcelinta waxay awood u siineysaa suuqleyda inay xogtaan u soo ururiyaan sida saxda ah, ka dibna ku dabaqaan iyagoo isku dhafan xogta kale ee astaanta, sida taariikhda wax iibsiga iyo tirakoobka dadka, si ay u gudbiyaan farriimo aan shaqsiyaad ahaan si gaar ah shaqsiyan u ahayn, laakiin sidoo kale soo dhaweynaya. Steve Krause, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Maareynta Wax soo saarka ee Jawaabaha
Jawaabaha Kala Dhexgalka Xulashada wuxuu u ogolaanayaa ganacsatada inay
Samee aragti mideysan oo ku saabsan dookhyada iyo oggolaanshaha kanaal kasta - Shirkadaha badankood waxay leeyihiin ilo badan oo ah macluumaadka doorbidista macaamiisha oo lagu kaydiyo dhammaan macluumaadka kala duwan.
Uruurinta dookhyada meel kasta oo macaamiisha joogaan - ha ka dukaameystaan ​​dukaan, ha la dhex galaan astaamo ku yaal Facebook, ama daalacanaya bogga mobilada, macaamiisha si fudud oo wax ku ool ah ayey ula wadaagi karaan sida ay jeclaan lahaayeen in magacyadu ula xiriiraan iyaga.
Iska yaree khatarta u hoggaansamida - Jawaabaha Ka-hortagga Is-dhexgalka ayaa damaanad qaadaya saxsanaanta rukhsadaha macaamiisha waxayna ku kaydinaysaa macluumaadkaas meel dhexe, oo lagu keydin karo hanti-dhawr, iyadoo u dhaqmeysa sidii hal il oo run ah oo laga helayo dookha macmiilka.
Iyadoo lala kaashanayo habdhaqanka hodanka ah, tirakoobka bulshada iyo xogta bulshada Jawaabcelin horeyba loogu muujiyey suuqleyda, Jawaabcelinta Isdhexgalka Jawaabtu waxay dhameystireysaa astaanta macaamiisha - xoojinta aragtida macaamiisha aqoonsigooda dhabta ah iyo awoodsiinta suuqleyda inay dhisaan xiriiro qoto dheer, waara oo faa'iido leh macaamiishooda.
Tags: doorashooyinkajawaabahaJawaabaha Kala Dhexgalka Xulashadadoorbidid midaysan
Video: Suuqa Sida Beyonce (NSFW)
Apr 29, 2013 at 9: 37 PM
Waad ku mahadsan tahay maqaalkan! Waxaan u maleynayaa inay runtii weyn tahay in awoodda si fudud loogu ururiyo loona maamulo dookha guud ahaan dhibcaha taabashada dhijitaalka ah iyo kuwa jireedba ay dhawaan noqon doonto wax la soo dhaafay!